နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် - Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge | Androidsis
Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge နှင့်အဓိကကွာခြားချက်များ
အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီက Galaxy S7 Edge ကိုဝယ်ယူခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်သတင်းဆိုးရှိသည် Samsung ကမနေ့ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်, Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus တို့နှင့်အတူ တိုးတက်မှုများစွာသော နှင့်ပိုပြီးအံ့မခန်းဒီဇိုင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်နိုင်ဘူး Galaxy S7 Edge ကိုဝယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ယေဘူယျအားဖြင့်ပေမယ့်, S8 နှင့် S8 + အသစ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရှေ့တွင်သာမကမိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံး၏ရှေ့တွင်ရှိနေသည် LG G6 သို့မဟုတ် Huawei P10 အပါအ ၀ င်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည်။
ဒီမှာ Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge အကြားအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်မိုဘိုင်းဖုန်းမျိုးဆက်နှစ်ဆက်၏ထိပ်ဆုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge တို့၊
Samsung ရဲ့ Galaxy S8 ပို
Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge
resolution ကို 2960 x 1440 (တစ်လက်မလျှင် ၅၇၀ ပစ်ဇယ်) 2560 x 1440 (534 dpi)
သိုလှောင်မှု 64 GB ကို 32 / 64 GB အထိ
ဘက်ထရီ 3500mAh 3600mAh
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ဟုတ်တယ် (နောက်ဘက်မှာ) ဟုတ်ကဲ့ (ရှေ့အိမ်ခလုတ်တွင်)
သည်အခြား features တွေ Google Assistant Bixby -
ရှုထောင့် 159.5 73.4 8.1 မီလီမီတာ 150.9 72.6 7.7 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 173g 157g
က Galaxy S7 Edge
က Galaxy S8 Plus အား
၎င်းတို့တွင်တူညီသောအရာအချို့ရှိသော်လည်း Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge အကြားအဓိကကွာခြားချက်များစွာရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုက Samsung မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှထွက်ခွာသွားခဲ့သောကြောင့် screen အရွယ်အစားနှင့်သက်ဆိုင်သည် S5.5 Edge ပေါ်7လက်မ တစ် ဦး အထင်ကြီးရန် S6.2 Plus ရှိ ၆.၂ လက်မမျက်နှာပြင်.
အကောင်းဆုံးကတော့ S8 Plus မှာပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် S7 Edge ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကအများကြီးပိုကြီးတာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဤအဓိကအားကြောင့်ဖြစ်သည် Samsung သည် Home ခလုတ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် device ၏ frames များကို minimize လုပ်ခဲ့သည် အောက်ခြေနှင့် logo ကိုထိပ်ဆုံးတွင် ထား၍ မျက်နှာပြင်အတွက်သာနေရာချထားသည်။
နောက်ထပ်အသစ်အဆန်းကတည်းကထို Processor ကိုဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် Galaxy S7 Edge တွင် Snapdragon 820 ရှိပြီး S8 Plus တွင် Snapdragon 835 ပါဝင်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာဥရောပအပါအဝင်အချို့သောနယ်မြေများတွင်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောစျေးကွက်ကိုရောင်းချနိုင်သည် Exynos 8895 ရှစ်ခု core SoC, အ SD835 အလားတူစွမ်းဆောင်ရည်ကမ်းလှမ်း။
ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းတွင် S8 Plus သည်အရေးကြီးသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ပါ ၀ င်သည် Bluetooth 5.0 စံနှုန်းနားကြပ် (သို့) စပီကာနှစ်ခုသို့အသံလွှင့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဤအတောအတွင်း, Galaxy S7 Edge သည် Bluetooth 4.2 LE အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၎င်းသည်အားနည်းနေသော်လည်း၎င်းသည်စံနှုန်းသစ်နှင့်တူညီသောအသံအရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်။
Galaxy S7 Edge နှင့် Galaxy S8 Plus
ထို့အပြင် S8 Plus နှင့် S7 Edge နှစ်ခုစလုံးသည်၎င်းနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည် ခုခံလက်မှတ် IP68 (မိနစ် ၃၀ အတွင်းနက်ရှိုင်းသော ၁.၅ မီတာအကွာအဝေးတွင်ရေတွင်နှစ်မြှုပ်နိုင်သည်) ၎င်းတို့တွင်လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၊ နားကြပ်ပေါက်များနှင့် dual band AC WiFi ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, S8 Plus တွင် USB-C port တစ်ခုပါရှိသည်၎င်းသည်၎င်း၏ယခင် microUSB 2.0 connector ကိုအသုံးပြုနေစဉ်။
အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှိုင်းယှဉ်ဇယားတွင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းတူညီဖြစ်ကြသည်။ Galaxy S8 Plus တွင်ပါဝင်သည် 3500mAh ဘက်ထရီနှင့် S3600 Edge အတွက် 7mAh ဘက်ထရီ၎င်း၏အနိမ့်ဆုံး resolution ဖန်သားပြင်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နှစ် ဦး စလုံး devices များပေး တူညီတဲ့ RAM ကို,4ဂီဂါဘိုက်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်မှတ်သားထားသင့်သည်မှာ terminal နှစ်ခုလုံးရှိသည် Dual-Pixel autofocus၊f/ 12 aperture နှင့် optical image stabilization တို့ပါဝင်သည့်အတူတူပင် 1.7-megapixel အနောက်ကင်မရာကျနော်တို့ရှေ့အပေါ်နေစဉ်, S8 Plus တွင် Iris Scanner ပါသည့် 8 megapixel ကင်မရာS5 Edge ရှိ7megapixel sensor ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြနိုင်သည်။
လူအများစုကဒီနှစ်ခုကြားမှာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာတွေးမိလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါကတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီသင်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်ရဲ့ ဦး စားပေးအဘယ်အရာကိုမြင်သင့်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ သင်ဘက်ထရီနှင့်အသုံးပြုမှုအချိန်ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါက S7 Edge သည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မျက်နှာပြင်အရွယ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အဓိကဖြစ်ပါက S8 Plus သည် ပို၍ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် S8 Plus တွင် virtual assistant ကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိမထားမိပါ Bixby သို့မဟုတ်များအတွက်ထောက်ခံမှု Samsung Dexလက်ကိုင်ဖုန်းများကို desktop ကွန်ပျူတာများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခု။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်လည်း terminal ကိုနှစ်ခုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူရို 300 ၏စျေးနှုန်းကွာခြားချက်, ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အားလုံးပြီးနောက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy S8 Plus သည် Amazon မှတစ်ဆင့်ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည် တရားဝင်စျေးနှုန်း ၄၅.၉၉ ယူရို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Samsung Galaxy S8 Plus နှင့် Galaxy S7 Edge နှင့်အဓိကကွာခြားချက်များ
[APK] သင်နားထောင်နေသည့်ဂီတကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး You Tube မှပြသရန် app တစ်ခု